Incazelo yokulala lapho ubona izicathulo: ukuhumusha kwengqondo
Incazelo yephupho lapho ubona izicathulo.
Ungenza ngaphandle kwamashekhi, amabhande, amawashi kanye nezinye izinto, kodwa izicathulo zingumhlonipho ongenakulinganiswa wesithombe sethu. Ngezinye izikhathi esikhwameni ungabheka isimo somuntu, kanye nesimo sakhe senhlalakahle. Kodwa bambalwa kakhulu abantu abazi ukuthi isithombe sezicathulo ephusheni sithatha nolwazi oluningi mayelana nokuphila komphuphi. Ukuze uchaze ngokunembile umyalezo walephupho, zama ukukhumbula isitayela sezicathulo, isimo saso nezenzo zakho phezu kwalo.
Kungani ngiphupha ngezicathulo?
Izikebhe ngamaphupho zinomfanekiso wokuhamba, ukuhamba kanye nanoma yikuphi ukunyakaza. Kodwa ngaphandle kwalokhu, lesi sibonakaliso singakwazi ukuhunyushwa njengengxenye ye-harbinger yanoma yiziphi izinguquko. Isibonelo, kumhumushi weMiller ungathola incazelo, ngokusho ukuthi, izicathulo ezihlanzekile zifanekisela inhlanhla nokuqashelwa emphakathini, izithembiso ezingcolile inhlanhla nokuhlukana. Ukuthengwa kwezigqebhezi kungabonisa ukukhokha kokuqala kwezenzo zabo ze-mercantile nokuhaha. Hlanza izicathulo zakho noma izicathulo - uphawu lokuhlonipha phakathi kwabantu abakuzungezile. Ngokusho kwencwadi yephupho likaMiller, izicathulo zokulinganisa kusho izinkolelo zamanga.
Ngomhumushi womprofethikazi owaziwa kakhulu uVanga, kuthiwa isihlangu sikwazi ngaphambili komgwaqo kanye nezinkinga zansuku zonke. Uma le ntombazane iphupha isithombe lapho ezama khona izikhumba noma izicathulo, lokhu kubonisa ukujwayelana okuseduze nomuntu othakazelisayo noma ukukhashelwa komlingani wakho.
Bheka indaba okufanele ngisuse ngayo izicathulo - ubunzima bezezimali, ukuhamba noma ukukopela engxenyeni yomngane. Sasizizwa singakhululekile ephusheni ngenxa yezinyawo eziqinile, futhi ngokushesha uzobukeza kabusha indawo yakho. Okokugcina, uthatha isinqumo sokuqeda ukuxhumana nalabo ababengakujabulisi kuwe. I-grate corn ibonisa ukukhwabanisa noma ukungabi nalutho.
Ngokusho kwencwadi yephupho kaFreud, ke-ke, iziphi izicathulo eziphuphayo, zingahlotshaniswa nezinguquko eziqakathekile ekugcineni. Thola pair of shoes - kuyoba umshado noma umcimbi othakazelisayo (ukuphola, izindaba zokukhulelwa). Izikebhe ezinesithende zifanekisela ukukhathazeka nokuma okusezingeni phakathi kwabangane. Ukubona ephusheni ama-pair of pair of izicathulo ahlukene aveza impumelelo esheshayo empilweni yabo siqu, ukuhlukahluka kobulili.
I-Nostradamus ingathola incazelo ehlukile yokulala. Isibonelo, izicathulo ezindala (noma esinye isitayela) - isibonakaliso sokungajabuli emshadweni. Izicathulo ezintsha nezihle - zizoba ngumndeni ojabulayo futhi oqinile. Lahleka lapho uhamba isithende - ithayi noma uhlukanisa nomuntu othandekayo. Thola emgwaqweni womuntu noma izithende, bese ulindela isipho esihle.
Okunye ukuhumusha okuhlobene nezicathulo ephusheni
Ukwamukela njengesipho izicathulo ezintsha, ezinhle, kusho izindaba ezingalindelekile ezihlobene nomndeni wakho. Lezi zindaba kungenzeka ukuthi zilungile. Ukunikeza izicathulo ezithile kuyisibonakaliso sokuthi ngeke uthole izikweleti ezindala emuva. Lokhu kusebenza hhayi kuphela kwimali, kodwa nakweminye impahla.
Isithombe sesigqoke sesihlangu singasifaka ukulahleka, ububha noma isehlukaniso nomlingani wakho. Njengoba kuchazwe ezincwadini zephupho, umphumela wesenzakalo esingathandeki kuyoba umphuphi kanye nesimo sakhe sengqondo esingalungile ezindabeni noma kubantu abakuzungezile.
Lokho okushiwo yizincwadi zephupho ngezicathulo akufanele neze kukucasule. Ngokuphambene nalokho, lolu lwazi lungasiza ekugwemeni izingxabano eziningi nezimo ezingathandeki. Kodwa-ke sithemba ukuthi uthole incazelo enhle kuphela!
Umshonile waphupha: lokhu kusho ukuthini?
Kungani uphupha imali?
Ingabe kukhona amaphupho ongokwesiprofetho empeleni?
Kungani amaphupho amaphupho amabi
Inkukhu iphapha nge izaqathe
Isobho se-egg ngesitayela samaRoma
Ikhambi elimangalisayo ngokumelene ne-cellulite
Indoda isesabisa kakhulu isabelomali somndeni
Soufflé kusuka cod
I-cilantro sauce yezinhlanzi nenyama
I-makeup "engenakuthola" kusuka ku-MAC: izinyathelo ezintathu zokusalela ekuseni
Indlela yokuthokoza ngokusiza ngocansi lwe-tantric
Izimbali ezingaphandle: sloumberbera
Isitoreji, imidlalo yokunakekela
Izakhiwo eziwusizo zemifula
Izitayela zezinsipho zomsindo wezinkanyezi